Gary Neville Oo Cadaawad Aan Hore Loo Arag U Muujiyay Liverpool Iyo Waxa Uu La Doonayo Reds Oo Sharaxay. - Gool24.Net
Gary Neville Oo Cadaawad Aan Hore Loo Arag U Muujiyay Liverpool Iyo Waxa Uu La Doonayo Reds Oo Sharaxay.
Khabiirka Sky Sports ahna halyay Manchester United ee Gary Neville ayaa cadaawad aan hore loo arag u muujiyay kooxda Liverpool wuxuuna tilmaamay arin uu doonayo in ay Reds ku dhacdo si uu farxadiisa ugu wayn u helo.
Gary Neville ayaa ku dooday in uu jeclaan lahaa in uu arko in Liverpool ay 12 dhibcood hogaanka Premier league ku hayso marka la soo gaadho bisha March balse ay dhamaadka xili ciyaareedka ay la kulmaan burbur ay horyaalka ku lumiyaan si uu ugu raaxaysto.
Gary Neville ayay hadda xanuunka ugu wayn ku haysaa in Liverpool ay kooxdiisii hore ee Manchester United ka sarayso kala badh in ka badan dhibcaha ay Red Devils soo shaqaysatay, wuxuuna u arkaa waxa kaliya ee uu xanuunkan ku bogsiin karo in Liverpool ay si xun koobka u seegto.
Gary Neville ayaa Sky Sports u sheegay in haddii ay Liverpool hadda iska tuurto dhibcaha ay koobka Premier League ku hogaaminayaan in ay u noqon doonto waxa ugu fiican ee uu sanadkan arki karo.
Gary Neville oo Liverpool ka hadlaya ayaa yidhi: “Haddii ay iyagu hadda iska duuliyaan, waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah sanadihii aan Sky Sports ku qaatay”.
Gary Neville oo cadaawad aan hore loo arag u muujinaya kooxdii uu la soo xifiltamay ee Liverpool ayaa yidhi: “Daacad ahaantii, waxay noqon kartaa khibrad cajiib ah in aan daawado tan iyaga oo 12 dhibcood ku hogaaminaya kadibna ay indhahayga ku hor burburto!!”.
“Xaqiiqdii waxaan rajaynayaa in ay 12 dhibcood hogaanka ku hayaan March, kadib ay dhamaadka qurub-qurub u daataan” ayuu Neville hadalkiisa sii raaciyay isaga oo Liverpool waxa ugu xun la doonaya.
Intaas kadib Gary Neville ayaa walaac ka muujiyay in waxa uu doonayaa ku dhici karo Liverpool wuxuuna yidhi: “Laakiin waxaa qasab igu ah in aan sheego in ay hadda laba sanadood soo muujiyeen qaab ciyaareed joogto ah, waxay ciyaarayeen kubbada cagta oo koob guulaysi ah muddo laba sanadood ah, waxayna urursadeen dhibco layaableh taas oo ay xili ciyaareed kasta oo kale ay koobka ugu guulaysan kareen”.
Gary Neville ayaa tilmaamay in xaalada ay hadda Liverpool ku jirto ay Man City ka hoosayso wuxuuna yidhi: “Man City waxay ka hoosaysaa halkii ay waajibka ku ahayd in ay ahaadaan. Liverpool waxaa qasab ku ah in ay hadda si adag u shaqeeyaan si ay hadda ugu guulaystaan, waxaa waajib ah in ay ka fikirayaan in uu sanadkoodii yahay”.